Agoosto | 2018 | WEEJIDOW
Archive for Agoosto, 2018
War deg deg ah: Shabaab oo dilay Taliye uu dhalay Wasiiru dowlihii hore ee Madaxtooyada Somaliya
Agoosto 31, 2018
WAAJIDPRESS – 31 August 2018:
Al Shabaab ayaa laba qof oo shacab ah waxa ay ku dileen gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib weerarkii xooganaa oo ay xalay saq dhexe ku qaadeen degmadaasi.
Shabaab labadan qof ee ay dileen ayaa waxa ay ahaayeen dad goobo ganacsi ku lahaa aagga fariisinka Makayga oo xalay uu weerarka ka bilawday, waxaana lagala soo baxay goobahooda ganacsi oo ay jiifeen.
Dadka degaanka ayaa sidoo kale ku waramay in gudaha degmada saakay lagu arkay qof gawracan oo la garan waayay, kaasi oo loo maleynayo inay gawraceen Shabaabkii xalay weerarka fuliyay.
Askartii xalay lagu dilay weerarka waxaa ka mid ahaa wiil uu dhalay Wasiiru dowlihii Madaxtooyada Soomaaliya Khaliif CABDULQAADIR Macalin Nuur oo ahaa Taliyihii ciidanka ku sugnaa fariisinka Mukayga, waxaana lagu magacaabi jiray Cumar.
Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda ayaa hawlgallo gaar ah ka wada goobihii xalay uu ka dhacay weerarka, waxayna ku daba jiraan Shabaabakii weerarka soo qaaday.
Al Shabaab ayaa bishiiba mar ama laba mar waxa ay weerar ku qaadaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, Koonfur Galbeed weli xal uma aanay helin weerarada Al Shabaab.
War deg deg ah DAAWO: XILDHIBAANADA BAARLAMAANKA FEDERAALKA EE UGU BADAN EE SOOMAALIYA AYAA LAGA SOO DOORTEY BAYDHABA OO MAANTA EEDEYN KULUL U JEEDIYEY DOWLADA FARMAAJO
WAAJIDPRESS – 30 August 2018:
War deg deg ah: Madaafiic ku dhacday Xaafada Geed Jaceyl ee Degmada Wartanabadda ee magaalada Muqdisho
Agoosto 30, 2018
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya degmada Wartanabadda ee gobolka Banaadir, tiro madaafiic ah ayaa galabta ku dhacday xaafada Geed Jaceyl ee degmadaasi.
Idaacadaha ayaa sheegey Madaafiicdan oo tiradooda ay gaarayso Saddex Madfac ayaa la sheegay inay ku dhaceen laba ka mid ah meelo banaan ah oo aysan ka dhalan waxyeelo soo gaartay dadka rayidka ah, balse mid ka mid ah uu ku dhacay laamiga, islamarkaana uu geystay khasaare dhaawac ah.
Madaafiicdan oo aanan la ogeyn rasmi ahaan halka laga soo tuuray ayaa mar kaliya la maqlay Jugtooda, taasi oo argagax gelisay bulshada ku nool xaafada Geed Jacley ee Degmada Wartanabadda.
Warar aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa Afar qof ay ku dhaawacmeen Madaafiicdan oo ay ku jirto Haweeney, kuwaasi oo la dhigay isbitaalada ku yaalla Muqdisho.
Maamulka degmada Wartanabadda iyo laamaha ammaanka ayaa waxa ay tageen goobaha ay ku soo dhaceen Madaafiicdan, waxayna ku guda jiraan baaritaanada la xiriira halka laga soo tuuray Hoobiyeyaashan iyo cida ka dambeysay.
Madaafiicdan ayaa waxa ay ku soo aadeen xili Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu maanta booqasho ku tagay Stadium Muqdisho oo maalmo kahor ay baneeyeen AMISOM, kaasi oo qeyb ahaan ku yaalla Wartanabadda.
DAAWO: SHEYBAAR LAGU BAARAYO LAGUNA DAAWEYNAYO XOOLAHA OO MAANTA LAGA FUREY BAYDHABA
Askari ciidanka dowladda ka tirsan oo Muqdisho ku toogtay Mooto Bajaajle
Sida ay sheegayaan waraka inaga soo gaaraya isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho, askari ka tirsan ciidanka Minishiibiyada ayaa duhurnimadii maanta waxa uu halkaasi ku dilay Wiil Mooto Bajaajle ahaa.
Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen ka hor inta aanu falka dhicin inay wada murmeen askariga iyo marxuumka la toogtay, intaasi kadibna ay xigtay rasaas uu riday askariga.
Ciidamo Boolis ah oo ka akdhawaa goobta uu dilka ka dhacay ayaa ku baxay falkan, waxayna ku daba jiraan gacan ku dhiiglaha dilka geystay oo baxsad ah.
Saraakiisha ciidamada Booliska Soomaaliya wali kama aysan hadlin falkan dilka ah ee askarigan uu kula kacay ruuxa watay Mooto Bajaajta oo aan waxba galabsan.
Dilalka loo geysanayo dhalinyarada ku shaqeysata Mooto Bajaajta ayaa maalmahan dambe kordhay, kadib markii 27-kii bishan bartamaha magaalada Beledweyne uu askari Boolis ah ku toogtay Yaasiin Cali Saney oo Mooto Bajaajle ahaa.
War deg deg ah: Dowlada Itoobiya Oo Bilaabeysa Hub Ka Dhigista Ururo Uu Ku Jiro ONLF
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ugu baaqay ururradan inay hubkooda si nabad ah kusoo dhiibaan islamarkaasna ay ku dagaalamaan firkadahooda iyo qalinka.
Ururada dhawaan gogosha nabadeed ay dowladda Itoobiya u fidisay waxaa kamid ah ururka ONLF iyo OLF.
Xafiiska xiriirka dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in la sameeyay xafiis u gooni ah ururadii hubaysnaa ee dhawaan heshiiska la galay dowladda Itoobiya islamarkaasna ka shaqayn doono danaha ururadan.
DAAWO: MUDAAHARAAD LOOGA SOO HORJEEDO SHARIIF XASSAN OO MAANTA KA DHACAY MAGAALADA BARDAALE EE GOBOLKA BAY
WAAJIDPRESS – 29 August 2018:
DAAWO: SHIRKADA DUULIMAADYADA MAANDEEQ OO MAGAALADA WAAJID KA BILOWDEY DUULIMAAD TOOS AH MAANTA
Agoosto 29, 2018
War deg deg ah: Qarax gaari oo caawa ka dhacay Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan wadada Taleex, qarax gaari ayaa fiidnimadii caawa wuxuu ka dhacay halkaasi.
Gaariga qarxay oo nuuciisa ahaa kuwa raaxada ayaa waxaa saarnaa ninkii gaariga watay iyo qof kale, kuwaasi oo ilaa hadda aanan la ogaan waxa ay ahaayeen.
Wararka qaar ayaa sheegayan labada labada qof ee gaariga saarneyd inay ahaayeen shacab, halka warar kalena ay sheegayaan in mid ka mid ah uu yahay askari.
Qaraxa oo ahaa midka dhejiska ayaa si weyn looga maqlay degmooyinka deriska la ah Hodan, waxaana ka dhashay khasaare dhaawac ah oo soo gaaray labada qof ee gaariga saarneyd.
Hay’adaha ammaanka dowladda federaalka ayaa Dhacdo.com u sheegay in ay wadaan baaritaanada la xiriira qaraxan, islamarkaana ay dib ka soo sheegi doonaan faah faahin dhameystiran.
Ciidamada ammaanka oo tagay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa ay sameeyeen baaritaano amni xaqiijin ah, waxaana dib u soo laabtay isu socodka gaadiidka oo mudo yar hakad ku jiray.
DAAWO: GUDOOMIYIHII HORE EE BAARLAMAANKA Prof. JAWAARI OO KA HADLEY DOORASHOOYINKA DOWLAD GOBOLEEDKA KOONFUR GALBEED
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Agoosto, 2018.